संकटका एक्ला सारथी डा. केसी |
संकटका एक्ला सारथी डा. केसी
प्रकाशित मिति :2020-04-19 19:09:51
कैलाली । भनिन्छ, ‘संकटमा जसले साथ दिन्छ, भगवान उही हो ।’ कोरोना संक्रमणका कारण देश ठप्प भएको संकटको यो घडीमा कैलालीको सदरमुकाम धनगढीस्थित नवजीवन अस्पतालमा कार्यरत डा. जयराज केसी सुत्केरी महिलाका लागि भगवानै साबित भए । अस्पतालमा सुत्केरी व्यथा लागेर आएकाहरूलाई २४ घण्टा डुयूटीमा खटेर सेवा दिए । न खाना खाए, न नआराम गरे, सुत्ने त परैको कुरा हो ।
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीले वैशाख २ गते सूचना प्रकाशन गर्दै वैशाख ३ गतेबाट अस्पतालको प्रसूति सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको घोषणा गर्यो । प्रदेश सरकारले सेती अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गरिसकेको र संक्रमितको उपचारका लागि थप शैया आवश्यक भएकोले प्रसूति सेवा बन्द गरिएको र यो सेवा सरकारको ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लागू भएको नवजीवन अस्पतालमा लिन आग्रह गर्यो ।
काठमाडौंमा भर्खरै आमाको किरिया सकेर राम्ररी आराम पनि गर्न नपाइएको बेला यो खबर सुनेपछि नवजीवन अस्पतालमा कार्यरत डा. केसीलाई बेचैनी भयो । अस्पताल व्यवथापन समितिले संकटको यो समयमा अस्पतालले थप जिम्मेवारी लिएको खबर पाउनासाथ उनी किरिया बिदामा बसेकै बेला अचानक कार्यस्थल पुगे । र खटे आफ्नो ड्यूटीमा ।
नियमित ३ देखि ४ जना मात्रै सुत्केरी गराउँदै आएको नवजीवनमा सेती प्रादेशिक अस्पतालको सूचनासंगै वैशाख ३ गते ८ जना सुत्केरी हुन आए । प्रसूति सेवाका लागि ४ वटा मात्रै बेड भएको अस्पतालले सुत्केरी हुन आएका आठै जनालाई सेवा दियो ।
वैशाख ४ गते १४ जना सुत्केरी हुनका लागि भर्ना भए । जसमा ६ जनाको त अपरेशन नै भयो । डा. केसीले भने, ‘त्यो संख्या देखेर शुरुमा त निकै डर लाग्यो । म एक्लैले कसरी सक्छु भन्ने भो । तर हिम्मत बटुले । भर्खरै गुमाएकी आमालाई सम्झे । मलाई जन्माउँदा उहाँले पाएको पीडा महसुस गरें । अनि सुत्केरी व्यथामा छट्पटाइरहेका दिदीबहिनीको अनुहारमा मेरी आमा र दिदीबहिनीको प्रतिबिम्व पाउन थाले’ यसो भन्दै गर्दा निकै भावुक देखिएका डा. केसीले थपे, ‘हिम्मत हुँदा सकिदोरहेछ । निद, भोक लागेको पत्तै भएन । २४ घण्टा खटेपछि १४ जनाकै सहजै सुत्केरी गराएँ । यो कुराले मलाई आत्म सन्तुष्टि पनि मिल्यो ।’
दिनमा ३ देखि ४ जनाको मात्रै प्रसूति गराउँदै आएको अस्पतालले यो असहज समयमा सेवाका लागि आउने कुनै पनि महिलालाई फर्केर अन्त जान नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यही भएर आफ्नो टीममा भएका नर्शहरूलाई पनि २४ सैं घण्टा अस्पतालमा रहन आग्रह गरेको र उहाँहरूबाट पनि पूर्ण सहयोग पाएको डा. केसीले बताए ।
‘बिरामी भर्ना गर्नुमात्रै ठूलो कुरा होइन, बिरामीलाई राम्रो सेवा दिन सक्नुचाहिँ ठूलो कुरा हो’ डा. केसीले थपे, ‘यो मेरो पनि परीक्षाको घडी हो भन्ने लागेको छ । यसलाई सफलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सोचले काम गरिरहेको छु ।’ सेवाग्राहीहरू पनि सन्तुष्ट भएर फर्किएको देखेपछि आफूलाई थप हौसला मिलिरहेको पनि उनले बताए ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालले नवजीवनमा प्रसूति सेवा संचालन गर्ने निर्णय गरेकोप्रति डा. केसीले खुशी व्यक्त गरे । तर त्यो सेवा दिन नवजीवनमा कार्यरत म एक्लै डाक्टरले सक्छु कि सक्दिन भन्ने कुराको मतलब नगरेकोप्रति भने उनले गुनासो गरे ।
नवजीवन अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष यज्ञराज ढुंगानाले प्रसूति सेवाका लागि २४ सै घण्टा खटिरहेका डा. केसीको निकै प्रशंसा गरे । ‘दैनिक ३, ४ जना सुत्केरी गराउने क्षमता भएको अस्पतालले अहिले दैनिक १४ जनासम्म सुत्केरी गराइरहेको छ । त्यो पनि एक जना चिकित्सकको भरमा’ ढुंगानाले भने, ‘हाम्ले खबर गर्नेबित्तिकै आमाको किरिया बिदामा बसेका बेला पनि उहाँ तुरुन्तै आउनुभयो । मातृ पीडाको समयमा आफूलाई सम्हालेर निरन्तर ड्यूटीमा खटिनु भएको छ । उहाँको यो साहस, इमान्दारिता र कामप्रतिको लगनशिलतालाई हामीले उच्च सम्मान गरेका छौं ।’
स्मरणरहोस्, सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रसूति सेवा नवजीवनबाट दिने र त्यो अवधिभर सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रसूति सेवामा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि नवजीवनमा पठाउने अस्पतालको निर्णयलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकले भने टेरेनन् । प्रसूति सेवा दिन नवजीवन अस्पताल गएनन् । अन्ततः अस्पतालको यो निर्णय चौथो दिनमै उल्टियो । र सेतीले वैशाख ५ गते पुनः सूचना जारी गरि सोही दिनबाट प्रसूति सेवा सुचार भएको जानकारी गरायो ।